“Tokony hatoky tena ianao rehefa manazava ny hevitrao, amin’izay hita hoe tsy misalasala. Ianao tsinona tsy hoe ampirisihin’ny olona fotsiny, fa tena resy lahatra mihitsy hoe izay no tsara.”—Jill.
“Tiako ny boky ‘Manontany ny Tanora’ satria tena mampisaintsaina. Ao amin’ny Boky 1, pejy 187, ohatra, misy hoe: Lasa toy ny hoe firavaka lafo vidy nefa omena fotsiny ianao, raha manaiky hasain’ny ankizy hanao firaisana aminy. Ao amin’ny pejy 177 koa misy hoe: Tsy asianao vidiny ny vatanao raha manao firaisana alohan’ny fanambadiana ianao. Toy ny sary hoso-doko lafo vidy ilay izy, nefa amafanao tongotra. Fa ilay sary ao amin’ny Boky 2, pejy 54, no tena tiako. Izao no voasoratra ao: ‘Raha manao firaisana alohan’ny fanambadiana ianao, dia toy ny hoe manokatra fanomezana mbola tsy nomena anao akory.’ Hoatran’ny hoe nangalarinao ny zavatra tokony ho an’ilay ho vadinao.”—Victoria.